Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay: Febraayo 5, 2021
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah wuxuu sharxayaa sida macluumaadka adiga kugu saabsan loo ururiyo, loo isticmaalo, loona shaaciyo Abaabulka ("Ururka"). Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah wuxuu khuseeyaa macluumaadka aan ururinno marka aad isticmaaleyso degelladayada, bogagga moobiilka, barnaamijyada moobiilka, iyo adeegyada kale ee khadka tooska ah ee ku xiraya Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah (si wada jir ah, "Goobaha") ama marka aad si kale noola macaamileyso.
Waxaan bedeli karnaa Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah waqti ka waqti. Haddii aan wax ka beddelno, waxaan kugu soo wargelin doonnaa annaga oo dib u eegayna taariikhda ugu sarraysa siyaasadda iyo, xaaladaha qaarkood, waxaan ku siin karnaa ogeysiis dheeri ah (sida ku darista qoraal boggayaga hore ama kuu soo dirno wargelin email ah). Waxaan kugu dhiirrigelinaynaa inaad dib u eegto Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah markasta oo aad gasho Goobaha si aad uga warhesho ku dhaqanka macluumaadkayaga iyo siyaabaha aad uga caawin karto ilaalinta asturnaantaada.
Macluumaadka Aad Na siiso
Waxaan ururinaa macluumaadka aad si toos ah noo siiso. Tusaale ahaan, waxaan ururinaa macluumaadka markaad buuxiso foom, ku tabarucdo, noo soo dir email, saxiixdo si aad u hesho cusbooneysiinta emaylka, saxiixdo codsi, iskaa wax u qabso iskaa wax u qabso, sameysato xisaab, jadwal u sameyso dhacdo, ka qeybgasho a tartan ama dallacsiin, samayso wax iibsi ama tabarucaad, nala soo xiriir annaga oo adeegsanaya bogagga warbaahinta bulshada ee dhinac saddexaad, codso macluumaad, ama haddii kale nalala soo xiriir. Noocyada macluumaadka ee aan soo aruurin karno waxaa ka mid ah magacaaga, cinwaanka emaylka, cinwaanka boostada, lambarka taleefanka, lambarka moobilka, macluumaadka kaarka deynta, iyo xiriir kale ama aqoonsiga macluumaadka aad doorato inaad bixiso.
Macluumaadka aan si otomaatig ah u ururinno
Markaad Adeegsanaysid Goobaha
Markaad gasho ama aad adeegsato Goobahayaga, waxaan si otomaatig ah u ururinaynaa macluumaadka kugu saabsan, oo ay ka mid yihiin:
Waxaan diiwaangelineynaa macluumaadka ku saabsan isticmaalka Goobaha, oo ay ku jiraan nooca biraawsarka aad isticmaasho, waqtiyada marin-u-helka, bogagga la arkay, cinwaankaaga IP-ga, iyo bogga aad booqatay ka hor intaadan marin goobahayaga.
Waxaan soo aruurin karnaa macluumaadka ku saabsan kumbuyuutarka ama aaladda moobiilka ee aad u adeegsato helitaanka Goobahayaga, oo ay ku jiraan qaabka qalabka, nidaamka hawlgalka iyo nooca, aqoonsiyeyaasha qalabka, iyo macluumaadka shabakadda moobiilka.
MACLUUMAAD AY SOO QAADATAY KOOKOOYINKA IYO FARSAMO FARSAMO FARSAMO:
Waxaan u adeegsanaa tikniyoolajiyadaha kala duwan si aan u ururino macluumaadka, tanna waxaa ku jiri kara u dirista 'cookies' kombiyuutarkaaga ama qalabkaaga mobilada. Kukiyada waa faylal yar yar oo xog ah oo ku kaydsan dirawalkaaga adag ama xusuusta aaladda taas oo naga caawinaysa inaan horumarino Goobaheena iyo khibradaada, arag meelaha iyo muuqaalada Goobahayagu caanka ku yihiin oo tiriyaan booqashooyinka. Waxaan sidoo kale aruurin karnaa macluumaadka adoo adeegsanaya beakonka websaydhka (sidoo kale loo yaqaan "raadinta pixels"). Boodhadhka shabakaddu waa sawirro elektiroonig ah oo loo isticmaali karo Sites ama emaylkeena oo gacan ka geysan kara bixinta cookies, tirinta booqashooyinka, fahamka isticmaalka iyo waxtarka ololaha iyo go'aaminta in emayl la furay oo wax laga qabtay. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan buskudka, iyo sida loo demiyo, fadlan ka eeg "Xulashadaada" hoosta.
Macluumaadka Aan Ka Soo Ururino Ilaha Kale
Waxaan sidoo kale laga yaabaa inaan ka helno macluumaad ilo kale oo aan ku darno taas macluumaadka aan ku ururinno Boggeena. Tusaale ahaan, haddii aad sameysato ama aad ka gasho koontadaada adoo adeegsanaya barta warbaahinta bulshada, waxaan marin u heli doonnaa macluumaad gaar ah oo ka socda boggaas, sida magacaaga, macluumaadka koontada, iyo liisaska asxaabta, iyadoo la raacayo nidaamka oggolaanshaha ee ay go'aamiso bulshada noocaas ah goobta warbaahinta. Waxaan sidoo kale u isticmaali karnaa macluumaadka noocaas ah ujeeddooyin isku mid ah.
Waxaan u isticmaali karnaa macluumaadka adiga kugu saabsan ujeedooyin kala duwan, oo ay ka mid yihiin:
Bixinta, dayactirka iyo hagaajinta Goobaheena;
Ku siiyaan oo kuu soo gudbiyo macluumaadka aad codsato, ka-qayb-galka macaamilka iyo macaamillada oo aan kuu soo diro macluumaadka la xiriira, oo ay ku jiraan xaqiijinta iyo qaansheegta,
Waxaan kuu soo dirayaa xaqiijin, ogeysiisyo farsamo, cusbooneysiin, digniino nabadgelyo, iyo taageero iyo fariimo maamul;
Codso jawaab celin iyo haddii kale si aan kaagala soo xiriiro isticmaalkaaga Goobaha;
Kajawaabo faallooyinkaaga, su'aalahaaga, iyo codsiyada oo aad u fidiso adeegga macaamiisha;
Waxaan kuu soo diri doonaa joornaallo iyo haddii kale waxaan ku siinayaa macluumaad ama adeegyo aad codsato ama aan u maleyno inay adiga xiiso kuu yeelan doonaan, sida inaan kuu soo diro macluumaad si aan kuugu ogeysiiyo arrimaha kala duwan, dhacdooyinka, ilaha, dallacaadaha, tartamada, badeecooyinka iyo adeegyada;
Waxaan kaa caawin doonaa inaad kugula xiriiraan taageerayaasha kale, iyo inaad ka codsato mutadawiciin arrimaha iyo ururada aan taageerno;
La soco oo falanqee isbeddellada, adeegsiga iyo waxqabadyada la xidhiidha Goobaheenna;
Shakhsiyeeyo oo hagaajiyo Goobaha oo aad siiso xayeysiis, nuxur ama astaamo u dhigma astaamaha isticmaalaha ama danaha;
Nidaaminta iyo soo gudbinta gelitaanka tartanka iyo abaalmarinta;
Xiriir ama isku dar macluumaadka aan ka helno dadka kale si ay kaaga caawiyaan fahamka baahiyahaaga iyo ku siinta adeeg wanaagsan; iyo
In la fuliyo ujeeddo kasta oo kale oo macluumaadka loo soo ururiyay.
Ururku wuxuu kuyaala wadanka Mareykanka macluumaadka aan ururinana waxaa xukuma sharciga Mareykanka. Adoo marinaya ama isticmaalaya Goobaha ama haddii kale na siinaya macluumaad, waxaad ogolaatay ka shaqeynta iyo wareejinta macluumaadka gudaha iyo Mareykanka iyo dalal kale.
Waxaan u wadaagi karnaa macluumaadka adiga kugu saabsan sida soo socota ama haddii kale lagu sifeeyay Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah:
Kuwa iibiya, la-taliyayaasha iyo bixiyeyaasha kale ee adeegga ama mutadawiciinta u baahan helitaanka macluumaadka noocaas ah si ay annaga noogu shaqeeyaan hawsha;
Iyada oo laga jawaabayo codsi macluumaad haddii aan rumeysanahay in shaacinta ay waafaqsan tahay sharci kasta, qaanuunka ama nidaamka sharciga, ama haddii kale uu u baahan yahay sharci kasta, qaanuunka ama qawaaniinta;
Haddii aan aaminsanahay in ficilladaadu aysan waafaqsanayn ruuxda ama luqadda heshiisyadayada ama siyaasadahayaga, ama ilaalinta xuquuqda, hantida iyo nabadgelyada Ururka, shaqaalaheeda, mutadawiciinta, ama kuwa kale;
La xiriirida, ama inta lagu guda jiro wada xaajoodka, dib u habeyn kasta, sameynta urur cusub, iibinta hantida ama wareejinta, maalgelinta ama macaamil bixinta ama xaalad kasta oo kale oo macluumaadka shakhsiga ah la shaacin karo ama loo wareejin karo mid ka mid ah hantida Ururka; iyo
Oggolaanshahaaga ama jihadaada, oo ay kujirto haddii aan kugula socodsiinno Goobahayada in macluumaadka aad bixisay loo wadaagi doono qaab gaar ah adiguna aad bixiso macluumaadkaas.
Waxaan sidoo kale la wadaagi karnaa isku-darka ama macluumaadka qarsoodiga ah ee aan si toos ah kuu aqoonsanayn.
Codsiyada khadka tooska ah
Haddii aad saxeexdo codsi khadka tooska ah ah, waxaad fahamsan tahay in codsigan oo kale uu yahay macluumaad dadweyne oo aan samayn karno codsiga, iyo magacaaga, magaaladaada, iyo wixii faallooyin ah ee la bixiyo ee la xidhiidha iyada oo si cad loo heli karo. Intaas waxaa sii dheer, waxaan ku siin karnaa codsiyo noocan oo kale ah ama uruurintiisa, oo ay ku jiraan faallooyinkaaga, magacaaga, magaaladaada, iyo gobolka aad u leedahay hoggaamiyeyaasha qaran, gobol ama kuwa maxalliga ah, ama saxaafadda;
Astaamaha Wadaagista Bulshada
Goobaha ayaa laga yaabaa inay ku siiyaan astaamo wadaag wadaag bulsheed iyo aalado kale oo isku dhafan (sida Facebook badhanka "Like"), oo kuu ogolaanaya inaad la wadaagto ficillada aad ka geysanayso Goobahayada warbaahinta kale, iyo tan ka soo horjeedda. Adeegsiga astaamahan oo kale waxay awood u siineysaa la wadaagga macluumaadka asxaabtaada ama dadweynaha, iyadoo ku xiran dejinta aad la sameysid hay'adda bixisa muuqaalka wadaagga bulshada. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan ujeedada iyo baaxadda uruurinta xogta iyo ka shaqeynta ee la xiriirta astaamaha wadaagista bulshada, fadlan booqo siyaasadaha asturnaanta ee hay'adaha bixiya astaamahan.
ADEEGYADA IYO XAALADAHA ADEEGYADA AY SIIYAAN kuwa kale
Waxaan u oggolaan karnaa dhinacyada saddexaad inay adeegsadaan buskudyada ama teknoolojiyada kale si ay u bixiyaan adeegyo falanqeyn iyo inay ugu adeegaan xayeysiis degello kale oo ku saleysan booqashooyinkaaga boggan iyo bogagga kale ee ku baahsan internetka. Hay'adahaani waxay aruurin karaan macluumaadka ku saabsan isticmaalka Goobaha iyo degellada kale, oo ay ku jiraan cinwaankaaga IP-ga, biraawsarka webka, bogagga la arkay, waqtiga lagu qaatay bogagga, xiriiriyeyaasha la riixay iyo macluumaadka beddelka. Macluumaadkan waxaa u adeegsan kara Ururka iyo kuwa kaleba, iyo waxyaabo kale, falanqaynta iyo la socoshada xogta, go'aaminta caan ka ahaanshaha waxyaabaha qaarkood, gaarsiinta xayeysiinta iyo waxyaabaha ku wajahan danahaaga iyo si fiican u fahamto dhaqdhaqaaqaaga internetka.
Tusaale ahaan, waxaan u isticmaali karnaa dib-u-eegista Google Analytics ama qalabyada dib-u-eegista kale si aan ugu xayeysiino khadka tooska ah. Tani waxay awood u siinaysaa iibiyeyaasha saddexaad, oo ay ku jiraan Google, inay ku muujiyaan xayeysiisyadayada bogagga internetka oo dhan. Iibiyeyaasha noocan oo kale ah, oo ay ku jiraan Google, ayaa isticmaali kara cookies-ka koowaad-sida (sida cookie-ka Google Analytics) iyo cookies-ka saddexaad (sida cookie-ka DoubleClick) si wadajir ah loogu wargaliyo, loo hagaajiyo, loona bixiyo xayeysiisyo ku saleysan booqashooyinkiinnii hore. boggayaga internetka. Macluumaadka ku saabsan sida aad uga bixi karto isticmaalka Google ee kukiyada xayeysiisyada ku saleysan xiisaha fadlan booqo Habeynta Xayeysiiska Google.
Macluumaad intaas ka badan oo ku saabsan xayeysiiska ku saleysan internetka, ama ka jooji in macluumaadkaaga daalacashada ee webka loo isticmaalo ujeeddooyin xayeysiis anshax, fadlan booqo www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp iyo
Ururku wuxuu qaadaa talaabooyin macquul ah si ay uga caawiyaan ilaalinta macluumaadka adiga kugu saabsan luminta, xatooyada, ku takrifalka iyo marinka aan la ogolaan, shaacinta, wax ka bedelka iyo burburka.
Inta badan daalacashada shabakada ayaa lagu wadaa inay aqbalaan kukiyada marka loo eego. Haddii aad doorbido, waxaad caadi ahaan dooran kartaa inaad dejiso biraawsarkaaga si aad uga saarto ama u diiddo cookies cookies. Fadlan la soco haddii aad doorato inaad ka saarto ama diido cookies, tani waxay saameyn ku yeelan kartaa helitaanka iyo shaqeynta Goobahayada.
Waad ka bixi kartaa helitaanka cusbooneysiinta iyo joornaalada ka socda Ururka adoo raacaya tilmaamaha emaylladaas ama adigoo noo soo diraya adoo gujinaya halkan. Haddii aad ka baxdo, waxaan wali kuu soo diri karnaa noocyo kale oo emayllo ah, sida kuwa ku saabsan isticmaalka Goobaha ama deeqo ama macaamil kasta.
Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah, fadlan riix halkan si aad noola soo xiriirto.
Website-ka DFL ee Gobolka Kandiyohi ayaa lagu marti galiyay barnaamijka Wix.com. Wix.com waxay na siisaa barxad khadka tooska ah oo noo saamaxaysa inaan adiga kaa iibino wax soo saarkeena iyo adeegyadeena. Xogtaada waxaa lagu keydin karaa Wix.com xogteeda, keydkeeda, iyo guud ahaan codsiyada Wix.com. Waxay ku keydiyaan xogtaada server-yada aaminka ah ee ka dambeeya firewall-ka.
Dhammaan albaabbada lacag-bixinta tooska ah ee ay bixiso Wix.com oo ay adeegsato shirkadeennu waxay u hoggaansamaan heerarka ay dejisay PCI-DSS sida ay u maamusho Golaha Heerarka Amniga ee PCI, taas oo ah dadaal wadajir ah oo noocyo ah sida Visa, MasterCard, American Express, iyo Discover. Shuruudaha PCI-DSS waxay gacan ka geysanayaan hubinta sida loo maareeyo macluumaadka kaararka deynta ee dukaankeenna iyo adeeg bixiyeyaasheeda
Waxaan kula soo xiriiri karnaa si aan kuu ogeysiinno koontadaada, si aan u xallino dhibaatooyinka koontadaada, si aan u xallino muranka, u soo aruurino khidmadaha ama lacagaha lagu leeyahay, si aan fikradahaaga ugu dhiibno sahanno ama su'aalo-weydiin, si aan ugu dirno cusbooneysiin ku saabsan ururkeenna, ama haddii kale loo baahdo inaan kula soo xiriiro si aan u dhaqan galino Heshiiskeena Isticmaalaha, sharciyada qaranka ee khuseeya, iyo heshiis kasta oo aan kula yeelan karno. Ujeeddooyinkaas awgeed, waxaan kula soo xiriiri karnaa emayl, taleefan, fariin qoraal ah, iyo boosta.
Haddii aadan rabin inaan sii wadno xogtaada, fadlan nagala soo xiriir contact@kandiyohidemocrats.org ama noo soo dir boostada: PO Box 543 Willmar, MN 56201
Waxaan xaq u leenahay inaan wax ka beddelno siyaasaddan asturnaanta waqti kasta, markaa fadlan si joogto ah dib ugu eeg. Isbedelada iyo cadeynta waxay si dhaqso leh u dhaqan gali doonaan markay ku dhajiyaan websaydhka. Haddii aan wax ka beddel ku sameyno siyaasaddan, waxaan halkaan kugula socodsiin doonnaa in la cusbooneysiiyay, si aad uga warqabto macluumaadka aan ururinno, sida aan u adeegsanno, iyo duruufaha jira, haddii ay jiraan, aan isticmaalno iyo / ama aan shaaca ka qaadno waa
Haddii aad jeceshahay inaad: marin u hesho, saxdo, wax ka beddesho ama tirtirto wixii macluumaad shakhsi ah ee aan kaa hayno, waxaa lagugu martiqaaday inaad nagala soo xiriirto contact@kandiyohidemocrats.org ama aad noo soo dirto boostada PO Box 543 Willmar, MN 56201